Iindaba-Iphepha lePulp lokucoca izixhobo zomgaqo-nkqubo
Iphepha lePulp lokucoca izixhobo zokulahla izixhobo
I-vortex slagger yaqanjwa ngo-1891, kodwa yaqala ukusetyenziswa kwishishini lephepha ngo-1906.
Ngelo xesha, i-vortex slagger yayisetyenziselwa kuphela ukususa ukungcola okunzima kwi-fiber slurry.
Umzimba ophambili we-slaghenator ye-slag sisilinda, esingakhange siphuculwe sibe yikhowuni kude kube malunga nee-1950s, kwaye sasetyenziswa ngokubanzi kwimizi mveliso yamaphepha.
Kwakungekho de kwangoko kwee-1960s apho i-vortex desander yayisetyenziswa ngokubanzi e-China.
Ukusukela ngeminyaka yee-1970, ngenxa yokwanda ngokukhawuleza kokusetyenziswa kwephepha lenkunkuma elibuye lisetyenziswe, iifayibha ezizizinto eziluhlaza eziluhlaza, uhlobo kunye nenani lokungcola kwi-fiber slurry inyuke kakhulu.
Kwiimfuno zokucoca i-pulp, ukuphuculwa kwe-slag ye-slag kukhawuleza kakhulu, kuye kwakho iintlobo ngeentlobo kunye neemodeli ze-slag ye-slag yokuhlanjululwa kwenkunkuma, njengokungcola okunzima kwi-slag ye-slag, ukungcola kokukhanya kwi-slag kunye neemveliso zothotho ze-slag zokukhupha iimveliso.
Okwangoku ukungcola okunzima kusetyenziselwa ukususa ukungcola okusemzimbeni kunye nokuxinana okuphezulu kunefibre.Okwangoku, zininzi izinto ezingcolileyo ezinobunzima beemveliso zoluhlu ezenziwe ngeentlobo ezahlukeneyo, iidayimitha, ubude bomzimba kunye nezixhobo.
Kwangelo xesha, inani elikhulu lokuphuculwa koyilo lenziwe kwindawo ethe tyaba, indawo ekutyiwa kuyo, islag outlet, eyona nto iphambili, isixhobo sokuphambuka, ukusebenza kwempahla kunye nohlobo lweyunithi edityanisiweyo ye-slag.
Ukunciphisa ukulahleka kwefayibha, i-pulp saver okanye isikhululo sokusetyenziswa kwakhona kwefayibha esinezixhobo ezithile. Ukugcina umbane, i-slagger engcolileyo ephezulu kunye naphakathi yaphuhliswa.
Ukukhanya okungcolileyo kwe-slagger ukungcola kwe-slagger ukukhanya okungcolileyo kwe-slagger luhlobo lwe-slagger eyilelwe ngokukodwa ukususa ubumdaka obuncinci kunenxalenye yefayibha kumgubo. Kubaluleke kakhulu ukucoca i-pulp yenkunkuma.
Ngenxa yokuba ubunzima bomxhuzulane obunzima kunye nokukhanya okungafaniyo kwahlukile kuleyo yefayibha, ulwalathiso lokuhamba kokuhamba kakuhle kwe-slurry kunye ne-slag slurry flow emva kokwahlukana kwahlukile kwi-slag ye-slag.
Ke ngoko, ulwakhiwo lwe-slag elimususayo ukususa ezimbini zahlukile. Nokuba ubume bokukhanya okungcolileyo buntsonkothe ​​ngakumbi, kwaye iiparameter eziphambili zobuchwephesha ezisebenzayo nazo zahlukile.
Ukucoca umgubo kunye nezixhobo zokuxhela ezisetyenziswa kushishino lwephepha.
Ubume bekhowuni kunye ne-Angle edibeneyo malunga ne-8 ~ 13 degrees. Yenziwe ngentsimbi engenasici, irabha elukhuni okanye intsimbi ebunjiweyo enemigca yeplastiki yeplastiki.
Udonga lwangaphakathi lugudile kwaye lucocekile, alunxibi, alunako ukuxinzelela, alunakumelana nokubola, kwaye alunakukhubazeka phantsi kobushushu obungama-40 ~ 60 ℃.
Isindululo se-Eddy sisetyenziselwa ukususa ukungcola okunzima.Ukusebenza ngokususa i-slag kuphezulu kune-eddy yangoku yokususa i-slag, enokunciphisa kakhulu isidanga sothuli.
Kwaye inokuba ziinyanda okanye imiqolo efanayo, umsila unokhethwa kumacandelo, ukunciphisa ukulahleka kwempuphu.